दुर्घटनास्थलमा भीआईपीको प्रवेश यसरी – Puleso
दुर्घटनास्थलमा भीआईपीको प्रवेश यसरी
घटना भएको करिब एक घण्टादेखि नै दुर्घटनास्थलमा भीआईपीको आउने क्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आए । लगत्तै, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि पुगे । त्यतिवेरसम्म विमानमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आइसकेको थियो ।
त्यसको केहीवेरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घटनास्थलमा प्रवेश गरेको खबर फैलियो । यद्यपि, उनी विमानस्थलका कर्मचारीसँग भेट गर्न पहिले पुगेका थिए । र, घटनाबारे जानकारी लिएका थिए ।
विमानस्थल प्रवेश गरेको करिब आधा घण्टापछि ओली घटनास्थलमा पुगे । र, घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने कोशिश गरेपछि उनी अन्य देशको भ्रमणमा रहेकाले कुरा हुन नसकेको बताए ।
त्यसको केही समयपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल आइपुगे । उनको कुरा सुनेर नजिकै रहेका मानिसहरुले भने आश्चर्य व्यक्त गरे । पौडेलले सँगै रहेका सुरक्षाकर्मीलाई सोधेका थिए, ‘कहिले दुर्घटना भएको हो ? कुन जहाज हो ? के कति क्षति भयो ?’
पौडेललाई घटना भएको दुई घण्टाभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि घटनाबारे जानकारी रहेनछ । उनको छेउमै रहेका सुरक्षाकर्मीले पौडेलका प्रश्नको जवाफ दिए । उनीहरुलाई हेर्ने अन्य सर्वसाधारण भने ट्वाल्ल परे ।(अनलाइन खबर)